I-Lorena: Yesimanje futhi Iyakhanya ku-Crosby Near Bike Trails
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Candace
U-Candace Ungumbungazi ovelele
Hlangana no-Lorena - le ndlu esanda kulungiswa futhi efakwe kahle isenkabeni ye-Crosby emgwaqweni onokuthula namabhulokhi amathathu kude ne-Cuyuna Lakes State Trail ukuze ufinyelele ngokushesha ku-Cuyuna Mountain Bike Trail System. Siyajabula ukwabelana ngamathiphu ethu angaphakathi nezivakashi zethu ukuze ujabulele i-Crosby ngokungcono kakhulu!
Uma ungena emnyango ongaphambili, ubingelelwa yivulandi engaphambili esikrinini lapho ungagcina khona amabhayisikili akho, amabhodi okugwedla, ama-skis, noma amanye amagiya angaphandle. Sihlele izihlalo ezipholile kanye nezihlalo zokukhempa ukuze izivakashi zizisebenzise uma zizoya epikinikini, ziqwale izintaba noma zibhukuda. Jabulela ikhofi ekuseni kuvulandi.
Indawo yokuhlala eyinhloko ineGumbi Nebhodi, usofa oyindlovukazi wokuzidonsela amanzi ngomsele wokunethezeka okusezingeni eliphezulu kanye ne-smart TV engu-50" lapho ongakwazi khona ukufinyelela okuqukethwe kwakho okusakazwayo. Khetha umlimi ovela eNkampanini Yokuphuza utshwala i-Cuyuna ku-Main Street futhi ujabulele ubhiya wasendaweni ngenkathi ubukele i-Netflix kusofa onethezekile. Ideski liyatholakala, ukuze nisebenze nobabili futhi nidlale kule ndlu. I-WiFi yamahhala ifakiwe.
Ikamelo lokulala linombhede wendlovukazi oneTuft neNeedle, umatilasi wegwebu lenkumbulo kanye nekhabethe elinesikhala esilengayo namashalofu. Imicamelo ye-Memory Foam isemibhedeni. Izimpumputhe zisemafasiteleni ukuze zivumele ukulala okuzolile.
Ikhishi linempahla emisha sha, yensimbi engagqwali ehlanganisa ifriji, i-microwave, ihhavini, nomakhi wekhofi. Kunenqwaba yezinto zokupheka ezingasetshenziswa izivakashi ukuze zenze ukudla okumnandi ngemva kosuku olujabulisayo ngaphandle. I-peninsula ende, yebhulashi ivumela isikhala esiningi sokulungiselela.
Igumbi lokugezela selilungiswe ngokuphelele ngobhavu/i-shower combo yokugeza ukuphumula eholidini lakho.
Ngaphandle sine-propane gas grill izivakashi zamukelekile ukuzisebenzisa. Sicela ungasebenzisi amalahle ku-grill ngoba lokhu kungonakalisa. Kukhona i-patio enetafula lokudlela elingaphandle kanye nomgodi womlilo onezihlalo ze-Adirondack ngemuva kwendlu.
Iwasha nokomisa kuyatholakala endaweni engaphansi ukuze izivakashi zizisebenzise.
Izivakashi zingakwazi ukupaka ezindaweni ezimbili zamatshe ngaphambi kwendlu. Kukhona nezindawo zokupaka eziningi emgwaqeni.
Indlu yethu ibizwa ngokuthi i-The Lorena ukuhlonipha impilo ka-Lorena Hickok owayeyintatheli emangalisayo futhi okungenzeka ukuthi wayethanda Inkosikazi Yokuqala u-Eleanor Roosevelt. U-Lorena Hickok wayeyintatheli eMinneapolis Tribune ngesikhathi kwakhiwa indlu yethu. Sihlonipha ifa lakhe njengentatheli ephula uphahla lwengilazi futhi siqinisekisa amalungelo abo bonke abangani bethu be-LGBTQ okuphila izimpilo zabo ngokulingana okuphelele futhi ngaphandle kokwesaba.
4.88 ·73 okushiwo abanye
4.88 · 73 okushiwo abanye
Ikhaya lethu lisenkabeni yeCrosby. Izindawo zokudlela eziyinhloko zasemgwaqweni, amabha, nezitolo kuwuhambo olusheshayo lwemizuzu emi-2 noma uhambo lwemizuzu eyi-10. Ungagxuma ku-Cuyuna Lakes State Trail kungakapheli imizuzu.
Izivakashi zizoba nobumfihlo kuleli khaya futhi zingene ngekhodi esemnyango ongaphambili. Siyikholi, umbhalo, noma umlayezo ngaphandle uma udinga usizo noma unemibuzo mayelana nendawo yasendaweni.
UCandace Ungumbungazi ovelele